SET lusekelwe encryption, iziqinisekiso digital kunye usayino lwedijithali (ehambelana utyikityo xa purchases ikhadi rhoqo).
SET ifuna software abathile efakwe kwi computer. Xa umthengi ezele ingobozi lwabo ukuyothenga yedijithali uze ukhethe 'umvuzo kunye namakhadi credit "kuthatha zonxibelelwano ezahlukeneyo. Izatifikethi bathunyelwa emva naphambili, ziyenziwa ombaxa odolo intlawulo lwedijithali eyayilawula ngaseludinini yenziwe. Kuba i KDE isakha ezivelayo wevenkile kukho ngako oko ebizwa ngokuba yi-iqhosha iingcambu kubo bonke abasebenzisi kwaye yakhelwe software.
SET yiprojekthi kunye nemigangatho yehlabathi ukuhlawula ngokukhuselekileyo amakhadi ngetyala kwi-Internet. Oku ikakhulu malunga ezorhwebo ngekhompyutha kunye nokuhlawulwa eyilwayo. Le projekthi yaqala kwi 90 ephakathi. Le ungayiqondiyo imele Nte Electronic Secure leyo Swedish na intengiselwano ekhuselekileyo elektroniki. Ngaphaya indalo umgangatho bakaThixo Iinkampani ezinkulu ezifana Visa, MasterCard, IBM, Microsoft kunye Netscape. Xa ke iprojekthi elilinge inxaxheba ukusuka Sweden ezinye kwiibhanki ezinkulu Postal Giro.
SET lusekelwe encryption, iziqinisekiso digital kunye usayino lwedijithali (ehambelana utyikityo xa purchases ikhadi rhoqo). wadala Technical Data a ebizwa ngokuba yi-virtual ( "lokwenziwa") amakhadi kubandakanywa ukusetyenziswa isatifikethi digital kwaye i khowudi inombolo yekhadi ithunyelwe. Yeyona ezibhankini ngokuqinileyo Verisign abalawula kunye nezatifikethi umba zombini abasebenzisi ikhadi kunye namashishini. Verisign i ikontraka le show. Merchant izatifikethi ezahlukeneyo onokuthelekiswa ukuze banqande yentlawulo kuyo edlulileyo kusetyenziswa xa usenza iphungulwe ukuthenga ngecredit card.
Cyber ​​Cash iye yanceda ukuphuhlisa SET kananjalo inkqubo efanayo ebizwa ii-SIPs zazo. SET kunye CyberCash isebenzisa uhlobo olufanayo encryption. Verifone enye iinkampani ezingabamelwane usebenzisa umgangatho SET, kwaye xa kuvavanywa ngayo. Ngenxa SET kunye efanayo iinkqubo, awukwazi imali phakathi kwabantu, njengoko amazwe ukuzama ukunqanda imali ngokungekho semthethweni kunye like. Njengoko ikheshi kangaka enye ngoko sebenzisa SET ukuba iintlawulo amancinci ngenxa yeendleko eziphezulu zolawulo.
Iikhompyutha kunye neenkampani computer - ihlabathi ngekhompyutha spine yezimali
E Sweden Savings Promotion of ekhokela ucinge ngephonografi G Svensson ummeli ekuqaleni lobuqu ukuba computerization ye egcina imali. Kwasekuqaleni kwenkulungwane 50 yabanjwa iinkomfa yonyaka Saltsjöbaden ezinxulumene kweebhanki computerization. 90 yaba elishumi xa Internet sangena ngamntu mnye ehlabathini ishishini. Iinkampani badla uqalise kunye neminye imisebenzi, kodwa ekugqibeleni kuba inkampani ikhompyutha enkulu. Ezi ke badla zadityaniswa iingxilimbela yenkampani enkulu.
Burroughs waba nkampani ikhompyutha enkulu kangaka, kugxininiswa ehlabathini zebhanki. Burroughs yakhiwe kuquka USWIFT. Le nkqubo yamazwe ngamazwe ukuze unxibelelwano phakathi iibhanki. edlulileyo Iinkampani ezinkulu ezizimeleyo Sperry. Burroughs mlawuli Michael Blumenthal, waphumelela ngowe-1986 ukuya ukudibanisa Burroughs kunye Sperry ku Unisys. Blumenthal Naye ngaphambili uMphathiswa wezeMali.
Omnye umzekelo inkampani, eFinland naseSweden inkampani IT esebenzayo Tieto phakathi kwezinye izinto syssIar ngecredit card nokukhutshwa kwiibhanki ezininzi. Facebook uye kakhulu kwi kwishishini yentlawulo. Le nkampani yasungula virtual (ibonakale okanye eyenziweyo) lwemali ngo-2011 kunye neenkampani umdlalo computer
ubeku kwangoko on. Facebook kwakhona izicwangciso kubasebenzisi million 500 wayeza kukwazi ukuhlawula nge-credit card nge chatappen Messenger. Ukusebenzisa iindlela software lengxoxo u "intetho umbhalo." Sithumela izivakalisi phakathi kwabo ngcembe (jonga intetho yefoni), ngokungafaniyo e-mail kunye imeyile rhoqo.
Xa umsebenzi wakhe kwakufuneka Armer ngexesha, i data kwi umvuzo kushishino lekhompyutha. Oku ukuba wenza ishishini amakhadi punch lokugcina data koko kuqala wacinga ngendlela engaziwa. Le data iqulethe enye kuphela kumvuzo, imfundo kunye ukwahlulwa gross wejografi kwimimandla emithathu. Xa uPawulos Armer Bahlele izinto ngendlela, akaba nako ngoko nangoko (ababengathanga okufunekayo, ukusuka ekuqaleni) ukubona ukuba ngubani na malunga nalowo wamkela imivuzo ephezulu. Esi sisiqalo ukuzinikela kwakhe ukuya kwingxoxo yabucala ithelekiswa ingqibelelo ikamva intsilelo kweentlawulo ngokuphathelene ikheshi.
Kuba abo kuphela abe nomdla ethile computer, ndinicebisa ukuba athenge ikhompyutha. Musa ukuthenga ikhompyutha kuba nje kusenokuba kuhle ukuba ngamanye amaxesha. Uyakwazi ukuphila ngaphandle. Yeyona kumgaqo ukuba athenge imoto leyo imi phantse nje egaraji. Ngenxa yokuba iinkampani computer nimane ngakumbi nangakumbi ngokuzama foist kuthi kontantlöshet kunye Big Brother ukuze abayi kuthengisa njengoko kwiikhompyutha ezininzi kangangoko befuna. Kwakhona iluncedo kakhulu kwaye kube mnandi into yokwenza nekhompyutha. Isizathu enkulu sokuba Usabambelele ukuze iikhompyutha kukuba ukubhala ezi ncwadi. Le khompyutha elibalaseleyo namathala eencwadi, wokuchwetheza kunye yokudlala ahlambuluke.
Yathi ke, umntu ngaphakathi Riksbank, kuba kanye, inyaniso ze. Kukho abaxhasi kunye ngabathengi ukuhlawula iintlawulo. Makhe sikuphephe undichukela ngendlela iintlawulo imali eninzi wamwisela kurhwebo kunye neebhanki. Le iibhanki, ngokuzenzekelayo, nge-avareji bamkela angamakhulu eziliqela eerandi yenzuzo olunyulu ngonyaka Swedish ngamnye. Noko ke, uyakwazi ukuthetha "kurhwebo amahlwempu" xa awukwazi lifake News babo bemihla ngemihla ebhankini. National Bank ufuna abantu ukuba basebenzise amakhadi ngaphezulu ukuwenza ngempazamo abantu abangaphezu "eliphezulu ngokwezoqoqosho". Nyberg Wayefuna ngebekuqiqa oku, kodwa akuzange kude ngokupheleleyo ngokuthetha inyaniso.
Xa intetho kwiminyaka engama-90 ubudala xa Stefan Ingves waba ingxelo usekela lerhuluneli, ulandela.
"Kuba iibhanki, kwakunye zokuphuma iintlobo ezahlukeneyo, yokuphatha leenowuthsi kunye zemali ngenxa småvärdestransaktioner kakhulu imali eninzi."
"Xa ingqiqo ebanzi, kungakuhle ukuba iintengiselwano ezininzi zenziwa ngekhompyutha ukususela ngaloo processing paper-based eninzi namhlanje sinokutshintshwa ngakumbi lifinyele."
Ingves amazwi okuqala ngoko ubuxoki ngokupheleleyo. Yinto kwabathengi hayi ebhankini, yaye norhwebo ukuba ekugqibeleni ithatha iindleko iintlawulo. Le ngxelo yesibini iyangqubana ekuthiwa "cala" i Riksbank kaThixo. Oko kukuthi, imfuno zoluntu ngemali abalawula isihlwele. Lomqulu ke Riksbank kontantlösheten evulekileyo.
Kwezinye iimeko ezininzi ezibhaliweyo kuphela ukuba iintlawulo ziya kuxabisa imali ishishini. Akunamsebenzi ukwahlula phakathi iindleko zentlalo yokwenene, iindleko zoshishino kunye ngeendleko zomntu lowo. Kuyinto olungenazo ukuthetha malunga naziphi na iindleko ezintathu ezahlukeneyo kuxhomekeke Ithanda ubuxoki. Le nto kufuneka sisebenzise lo ekugqibeleni kunomvuzo. Kule meko abathengi.